उद्योगी व्यवसायीका साझा एजेण्डा समाधान गर्नेछु : गणेश अधिकारी-Nagarikaawaj.com
नागरिक आवाज /बुटवल पुस २८
नेपालमा उद्योग व्यवसायीको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । आकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायिहरु पनि भित्रीरहेको देखिन्छ ।
धेरै व्यक्तित्व हरुको संलग्नता रहेको यस क्षेत्रमा केही सिमित व्यक्तिहरुले मात्र हाम्रो समाजमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाई सफल भएको देखिन्छ । यस्तै सफल व्यवसायिको रुपमा परिचित भएका व्यक्ति हुन गणेश प्रसाद अधिकारी ।
२०२८ सालमा पाल्पा जिल्लाको यम्घा जेमिरेमा जन्मिएका अधिकारी सानै उमेर देखिका सालीन, सहयोगी र मृदुभाषी व्यक्तिका रुपमा परिचित थिए । २०४६ सालमा पाल्पाकै दर्लम डाँडा माध्यमिक विद्यालय बाट एस. एल. सि. गरेका अधिकारी २०४६ सालमा थप अध्ययनको शिलशिलामा बुटवल झरे ।
बुटवलमा लुम्विनी वाणीज्य क्याम्पसमा भर्ना भइ आइ.कम पढ्न सुरु गरे । सामान्य परिवारमा जन्मिएका उनले पढाई संगसंगै २०४७ साल बाटै केही साथिहरुको सहकार्यमा मालति इन्डस्टिज प्राली सञ्चालन गरे संगै आफ्नो व्यवसायीक क्षेत्रमा पहिलो पाइला राखे ।
यो व्यवसाय गरिरहदा २०४८ साल देखी बुटवल राजमार्ग चौराहमा ३ वर्ष किराना पसल पनि गरे । राम्रो हुदै गइरहेको मालति इन्डस्टिज प्राली २०५५ सालमा विविध कारणले गर्दा बन्द हुन पुग्यो । एक सफल उद्यमी बन्ने अठोट का साथ अघि बढेका अधिकारीले २०५५ सालमै पुन केही साथिहरुको सम्लग्नतामा बुटवल अमरपथमा लुम्विनी पलाष्टिक हाउसको सञ्चालन गरे ।
यो व्यवसायलाई २०५९ साल सम्म सञ्चालनमा ल्याए । २०५९ साल पछी सोहि व्यवसायलाई एभरेष्ट एव्रापि एण्ड एलाइट इन्डस्टिज प्राली भन्ने नाम राखी थप व्यवस्थित गरे ।
व्यवसायमै सर्मपित भएका अधिकारिले २०६२ सालमा ४ जना सहकर्मि हरुको सहकार्यमा गुराँस पलाष्टिक उद्योगको सञ्चालन गरे । फस्टाउदै गइरहेको व्यवसायलाई थप मलजल गर्ने क्रममा २०६४ सालमा पञ्च महालक्ष्मी इन्डस्टीज प्राली गङ्गोलियामा सञ्चालन गरे जुन सोस्तिक ग्यास का नाम बाट सुपरिचत छ । समुहगत रुपमा सञ्चालन गरेको यो व्यवसाय वर्तमान समय सम्म पनी सञ्चालन भइरहेको छ ।
उद्यमी हरको सहकार्य थप झाङ्गिदै गर्दा २०७३ सालमा ५ जना उद्यमीहरु मिली बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमै नेपाल पलाष्टिक गोल्ड पलाष्टिक इन्डस्टीज सञ्चालन गरे । यो उद्योग एन.एस प्राप्त एच.डि.पि.इ. पाइप हो । जसमा प्रत्यक्ष रुपमा साढे ३०० जनाले रोजगार पाएका छन ।
एक सफल उद्यमीका रुपमा परिचत अधिकारी संलग्न ४ उद्योगहरु अहिले पनी सञ्चालन भइरहेका छन ।
नेपाल भित्रै रोजगारीका अवसर श्रीजना गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने उनी ५ मेगावाट क्षमताको हुक्दिखोला जलविद्युत आयोजनामा लगानी र लेखा समितिको संयोजक रहेका छन । त्यस्तै १५ मेगावाटको घारखोला जलविद्युत आयोजना म्याग्दीमा पनी संलग्न छन जुन निर्माणाधीन अबस्थामा रहेको छ ।
यस्ता विभिन्न औधोगिक क्षेत्रमा सर्मपित हुदै आइरहेका अधिकारी विभिन्न संघ संस्थाहरुमा पनी संलग्न र योगदान पु¥याउदै आइरहेका छन ।
उनी बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको पूर्व अध्यक्ष, रुपन्देही उद्योग संघको वरिष्ट उपाध्यक्ष, गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु हस्पिटलको कोषाध्यक्ष, सितल बचत तथा ऋृण सहकारी संस्था लिमिटेडको अध्यक्ष, नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघको केन्द्रिय सचिव र इन्दे्रणी बहुउद्धेश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको सल्लाहकार हुन
यसरी विभिन्न व्यवसाय, संघ संस्थाहरुमा सक्रिय रहदै आएका अधिकारीका १ छोरा र १ छोरी छन । उद्योग व्यवसायीहरुको हकहित र वढि भन्दा वढि उद्योगमा लगानी गरी देश भित्रै रोजगारको सृजना गर्नु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएका अधिकारी यहि पौष २९ गते हुन गइरहेको रुपन्देही उद्योग संघको २० औ अधिवेशन तथा ४० औ साधारण सभाको अध्यक्ष पदका उमेदवार वनेका छन ।